Indlela yokuphucula i-website yam yabantu abadala?
Kwiintsuku zethu i-SEO idlala indima ebalulekileyo kuyo nayiphi na intuthuko yoshishino nokuba unendawo yokutya ye-snack okanye isitolo sezesondo. Kuzo zombini iimeko, injongo ephambili yomntu woshishino kukuthabatha iindwendwe ezininzi nokunyusa imali yazo. Namhlanje ukwenza ukuba ishishini lakho liphumelele, kufuneka uyibeke kwi-intanethi kwaye ulungiselele ngokubhekiselele kuyo yonke imigangatho ye-injini yokukhangela - privat umzug in die schweiz. Ukuphakamisa i-grade kwi-SERP, xa uthengisa ngakumbi.
Ukuphuculwa kweenjini eziphambili ze-injini zifana nokulungelelaniswa okuqhelekileyo kunye nomlinganiselo owodwa kwinkqubo yokwakha izixhumanisi. Inzuzo enkulu kunazo zonke ze-SEO kukuba unako ukubeka i-website yakho kule ndawo ngenxa yokuncintisana ngokuncinci. Qinisekisa ukuba unendlela yokwenza imali nge-traffic yakho, njengoko ingafi ephantsi.
Makhe sixoxe ngendlela yokuqhuba i-traffic quality kwiziko lakho elidala kwaye ulifumane kwi-Google TOP.
Uphuhliso lwe-SEO ukudala
Kukho iinkalo ezine eziphambili ze-SEO ezisebenzela kakuhle nakweyiphi iikhankaso zokuphromotha kunye nokulungiswa kwewebhu kumntu omdala: ukufaneleka kwekhasi, igunya le-domain, igunya loqhagamshelwano, ukufaneleka izixhumanisi ezingenayo.
Ukufaneleka kwekhasi lewebhu kusebenza njengento ebalulekileyo ye-Google. Ibonisa kubasebenzisi bobabini kunye nabanxibelelwano bewebhu ukuba bafanele njani umxholo othile wewebhusayithi yombuzo womsebenzisi. Ukuze wenze indawo yakho ifanelekileyo, kufuneka ulungiselele imethadatha yayo kunye nomxholo. Okokuqala, kufuneka ufake izibakala eziphambili kwiimenu zakho zewebhu, izihloko, iinkcazo kunye namathegi e-alt ukuze uqinisekise ukuba abathengi bakho banokufumana indawo yakho kalula. Ngaphezu koko, kufuneka uvelise umxholo ophezulu kangangoko kunokwenzeka. Kwimeko yeziko elidala, ungabhala amabali angamaqabane kwaye ushicilele ngeveki.
Igunya lesiGaba lelinye iqela elibaluleke kakhulu le nyaniso inokuxelelwa ayinakwenziwa ngobusuku. Kuthatha ixesha lokufumana igunya lewebhusayithi. Ukuphucula igunya lakho lesigunyaziso, kufuneka uhlawule ngokugqithiseleyo ukulungiswa kwekhasi lakho kunye nokudala umkhankaso wokwakha isiqhelo. Ukongezelela, igunya lolawulo lwakuthatyathwa ngolu hlobo lwezinto zentlalo ezinjenge-click-through-rate, ukuguqulwa, ixesha eliqhelekileyo umsebenzisi usebenzisa isayithi kwaye.
Ngaphezu koko, kufuneka ulingane negunya lezixhumanisi zakho ezibangelwayo njengento ebalulekileyo echaphazela isayithi lakho elidala le-SEO. Kufuneka ubeke izixhumanisi kwiwebhusayithi kuphela kwimimandla egunyazisiweyo kunye nehlala ixesha elide abasebenzisi abathembayo. Kuya kukunceda ukuba unqamle indawo yakho yabantu abadala phambi kwezigidi ezikhuthazwa ngabasebenzisi. Ndikucebisa ukuba ucinge ngeengqamaniso zakho ezinxulumene nazo kunye nomgangatho wazo. Ngaphezu koko, kufuneka uqiniseke ukuba ubeka i-backlinks yakho efanelekileyo kwimimandla yakho yeemarike. Ngokomzekelo, kuya kubonakala ingaqhelekanga ukuba ufake ikhonkco lakho lewebhu kwi-domain ekugqibeleni ukutya kwabantwana.
Njengoko i-Google ayamkeli iipropati ze-PPC kumaziko amakhulu, kukho indlela kuphela yokutshala imali kwi-injini yokucwangcisa injini. Ndiyathemba ukuba iinkqubo zokwenza izinto ezikhankanywe apha kweli nqaku ziya kukunceda ukuba wakhe umkhankaso wokuphromotha kwaye uphucule isayithi lakho elidala le-SEO.